Hevitra MPANOHARIANA | Aogositra 2015
Amboarina ny lalana Isoavimasoandro-Ivato
2015-08-28 @ 07:44 in Ankapobeny
Efa namaky na nandre izany filazana izany angamba isika. Efa misy io lalana io ary efa nizorako na dia efa ela aza fa raha ny marina dia fanatsarana sy fanalehibeazana azy no sisa. Diso tanteraka noho izany ny finiavana hilaza azy ho fanokafana na famakiana lalana. Efa misy ihany koa ny lalana Ivato-Sabotsy Namehana na Ivato-Isahafa-Lazaina ary Isoavimasoandro-Ankadikely Ilafy saingy mbola lalatany avokoa ireo.
Fampanantenana nipoapoaka tamin'ny fifampiarahabana voalohan'ny taona 2013 nataon'i Andry Rajoelina, Filohan'ny FAT, tsy nanokafana tetibola manokana nolanian'ny Parlemanta, ny fanamboarana io lalana io saingy nangoronan'i Rajabali, Karana iray malaza ho mpanankarena, ny tany rehetra tamin'iny manodidina an'Isoavimasoandro iny. Kisendrasendra sy fifanandrifian-javatra ve sa nisy firaisana tsikombakomba tao ambadika?
Niara-nandre ny kabary ny maro fa nisoko mangina kosa ny fampiantsoan'i Rajabali izay manantany rehetra tamin'ny manodidina io Isoavimasoandro io tao amin'ny sekoly FJKM Paul Minault hividianany ny tany araka izay anombanan'ny milaza ho tompony azy tsy misy adivarotra fa ny ividianany ny tany ihany no fantany. Moa mba fantatry ny besinimaro izany zavamisy izany? Anontanio ny mponina eny fa nalaza teny izany. Fantatsika ny tohiny fa fampanantenana poakaty no nitranga ary lasan'ny Karana avokoa ny tany ka Malagasy maro dia maro no nivarotra ny tanindrazany tamin'izany nefa dia efa nodradradradraina ho tena ratsy indrindra izany mivarotra tanindrazana izany.
Tonga ny Repoblika fahaefatra fa dia mbola niverina indray ilay fampanantenana ary dia mbola tsy tanteraka ihany fa Rajabali indray no malaza ho nanamboamboatra ny lalana izoran'ny kamiao mitatitra tany hanotofana izao ao Mahatony izao. Fa tsy mahatezitra ny maro akory hay ilay mivarotra tany amin'ny vahiny fa mba mody tabatabaina eo. Lasa nanombatombana no niafarako hoe mety ho lasa lalana an'olona manokana no iafaran'io lalana efa nisy hatramin'ny Repoblika voalohany io fa mody fanina fotsiny ireto mpitondra mifandimby ireto.
Raha tena hanao dia ataovy fa aza mivarotra amin'olona ny lalana efa nisy hatramin'izay. Aza gaga raha lazaina ho Autoroute andoavambola ny fandehanana aminy rehefa kelikely nefa tsy fanjakana no tompony fa Rajabali raha izao fihetsika ataon'ny mpitondra izao no mitohy.
Jentilisa 27 aogositra 2015